Ihe ohu ahụ na-akụziri anyị na-abara anyị uru
Obere oge tupu e gbuo Jizọs, ya na Pita, Jems, Jọn, na Andru kpara nkata. Ná nkata ahụ, ha jụrụ Jizọs ihe ịrịba ama nke ọnụnọ ya na nke ọgwụgwụ usoro ihe a. Mgbe ọ na-aza ya, ya ajụọ otu ajụjụ dị ezigbo mkpa. Ọ jụrụ, sị: “Ònye n’ezie bụ ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi, onye nwekwara uche, nke nna ya ukwu mere onye na-elekọta ezinụlọ ya, ka ọ na-enye ha nri ha n’oge kwesịrị ekwesị?” (Matiu 24:​3, 45; Mak 13:​3, 4) Ihe Jizọs ji ajụjụ ahụ na-ekwu bụ na yanwa, bụ́ nna ha ukwu, ga-ahọpụta “ohu” ga na-enye ndị na-eso ụzọ ya nri ime mmụọ n’oge ikpeazụ a. “Ohu” ahụ abụghị naanị otu onye. Oleezi ndị ha bụ?
Ha bụ Ndị Kraịst ole na ole Chineke ji mmụọ nsọ tee mmanụ. Ọ bụ ha bụ Òtù Na-achị Isi nke Ndịàmà Jehova. Ha na-enye Ndị Kraịst ibe ha nri ime mmụọ n’oge kwesịrị ekwesị. Ọ bụ hanwa na-enye anyị ‘nri ga-ezuru anyị n’oge kwesịrị ekwesị.’​—⁠Luk 12:⁠42.
Ha na-elekọta ezinụlọ Chineke. (1 Timoti 3:15) Jizọs gwara ha ka ha na-elekọta ọgbakọ Jehova n’ụwa. Ha ga na-ahụ maka ihe ndị dị ka Ụlọ Nzukọ Alaeze, Ụlọ Mgbakọ na alaka ụlọ ọrụ dị iche iche e nwere n’ụwa. Ha ga na-ahụkwa gbasara ozi ọma a na-ekwusa n’ụwa, na-ahazikwa ọmụmụ ihe ndị anyị na-enwe n’ọgbakọ. “Ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi, onye nwekwara uche” na-ebipụtara anyị akwụkwọ dị iche iche anyị ji aga ozi ọma. Ọ bụkwa ha na-ahụ maka ihe ndị anyị na-amụ n’ọmụmụ ihe nakwa ná mgbakọ dị iche iche. Ọ bụ ụzọ ndị a ka ha si na-enye anyị nri ime mmụọ dị anyị mkpa n’oge kwesịrị ekwesị.
Ohu ahụ na-akụzi eziokwu dị na Baịbụl, ha jikwa ọrụ ikwusa ozi ọma Jizọs nyere ha kpọrọ ihe. Ọ bụ ya mere Jizọs ji sị na ha kwesịrị ntụkwasị obi. Jizọs kwukwara na ha nwere uche. Nke a gosiri na ha na-akpachapụ anya elekọta ihe niile o nwere n’ụwa. (Ọrụ Ndịozi 10:42) Taa, Jehova na-enyere ọtụtụ ndị aka ka ha bata n’ọgbakọ ya. Ọ na-enyekwara ohu ahụ aka ka ha na-enye ha niile nri ime mmụọ ga-ezuru ha.​—⁠Aịzaya 60:22; 65:⁠13.
Olee ndị Jizọs họpụtara ka ọ na-enye ndị na-eso ụzọ ya nri ime mmụọ?
Olee otú o si bụrụ na ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi ma nwee uche?
Isiokwu a ga-eme ka anyị ghọtakwuo ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi, onye nwekwara uche. Mata otú ihe ohu ahụ na-akụziri anyị si eme ka okwukwe anyị sie ike.